Marcus Rashford oo heshiis Wakhti Fog Ah u saxiixay kooxdiisa Man United | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Marcus Rashford oo heshiis Wakhti Fog Ah u saxiixay kooxdiisa Man United
Kooxda Man United ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay heshiis wakhti fog ah ka saxiixatay xiddiga weerarka uga ciyaara ee Marcus Rashford kaas oo mustaqbalkiisa u hibeeyay kooxda ku ciyaarta Old Trafford.
Marcus Rashford ayaa qalinka ku duugay heshiis cusub oo kooxda ku sii hayn doona ilaa xagaaga 2023 iyo waliba hal sano oo dookh ah.
Rashford oo 21 jir ah ayaa ka soo baxay Akademiyada Man United isaga oo joogay kooxda tan ilaa markii uu jiray 7 jir isaga oo kooxda u saftay 170 Kulan sidoo kale xulka qarankiisa England. us aftay 32 kulan.
Marcus Rashford oo ka hadlaya dareenkiisa ayaa yidhi” Man United waxa ay noloshayda u ahayd wax walba tan ilaa markii aan imid halka aniga oo 7 jir ah, kooxdan ayaa i tababartay shaqsi ahaan iyo ciyaartoy ahaanba, sidaas darteed waxa ay sharaf ii ah daqiiqad kasta oo aan halka joogo iyo fursad walba oo aan ku xidhan karo maaliyada kooxda”.
“Waxa aan doonayaa in aanu mahad celiyo Ole Gunnar Solskjaer iyo shaqaalaha tababarka wax walba oo ay ii qabteen, waa tababarayaal cajiib ah oo laga baran karo waliba iga caawin kara horumarka aan doonaya”.
“Waxa aan siin doonaa wax walba si aan kooxda u caawiyo uguna soo celiyo halkii ay u qalantay taageerayaashuna waxa ay u qalmaan arintaas”.